လှပသောနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဖို့စကားလုံးစိစစ်အတည်ပြုဘာလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Ну это еще со школьной программы известно, что написание той или иной буквы в слове должно быть так сказать доказано, проверено. Для этого и существуют проверочные слова. На этот раз для проверки правописания задано слово quot;ПРЕКРАСНЫЙquot;. Чтобы подобрать проверочное слово, необходимо в первую очередь для себя определить — что мы проверяем, какую букву. Так что даже в этом слове может каждый проверять что-то свое. Если вопрос о том, надо ли писать после буквы quot;Сquot; букву quot;Тquot;, то проверочное слово будет quot;ПРЕКРАСЕНquot;, так что слово целиком пишется без буевы quot;Тquot;.
Если вопрос в том, писать пре- или при-, то пре — приставка (превосходная степень),если прекрасный или прекрасТный, то сн — проверочное слово красен, так как после quot;сquot; нет quot;тquot;, в слове прекрасный quot;тquot; не пишем.
Quote စကားမြားကိုရေးသားသောအခါ, prekrasnyyquot; Quote options များရွေးချယ်ခြင်းသောအခါ, မှန်ကန်သောစာလုံးပေါင်းသံသယမည် prekrasnyyquot; သို့မဟုတ် quote; prekrastnyyquot; ။ စာလုံးပေါင်းစစ်ဆေးစေရန်, သငျသညျ Quote ရှိရာအက္ခရာများအတူတူပင်အမြစ်စကားလုံးကောက်လို့ရပါတယ်; tquot; အဘယ်သူမျှမ။ ဥပမာ Quote; krasaquot; ။
နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုရေးသားဖို့ လှပသော а не прикрастный надо посмотреть есть ли в других похожих словах буква т. Например в словах красивый и краса отсутствует буква т. Или — quot;как လှပသော ဒီ site သင်ရုံ posmotriquot; ။
ရေးသားခြင်းသို့မဟုတ်အသံထွက်လာသောအခါဒါတိကျစွာစာတစ်စောင် Quote လိုအပ်ရှိမရှိခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်, သင်နာမဝိသေသန၏တိုတောင်းတဲ့ပုံစံကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်;; prekrasnyyquot; ငါစနစ်တကျစကားလုံး Quote ရေးသားဖို့, ထင် tquot; ။ verification စကားလုံး, ဤကိစ္စတွင်ထဲမှာ, စကားလုံး Quote ဖြစ်၏ prekrasenquot; ။ ပေးစာ quote; tquot; ဒါဟာထားရန်မလိုအပ်ပါဘူး။
သငျသညျအဆင်းလှသောစကားလုံးစိစစ်အတည်ပြုကောက်လို့ရပါတယ်စကားမစပ် လှပသောထိုအခါကနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း unpronounceable ဗျည်းမျှကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်။
ရေးသားဖို့ပူးတွဲမှုမျိုးနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်သံသယရှိလျှင် Quote ၏တန်ဖိုးရှိပါတယ်အဖြစ်, သငျသညျ, ကြိုတင် console ကိုရေးသားဖို့လိုအပ်ပါတယ်; ochenquot;, အလွန်လှပသောဖြစ်ပါတယ်။
ငါ Quote ရေးသားဖို့ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်မမဘယ်လိုအကြောင်းကိုကြောင့် IDT ထင်; prekrasTnyyquot;? ))
Проверить написание слова quot;прекрасныйquot; можно словами quot;прекрасенquot;, quot;красаquot;, quot;красотаquot;, даже quot;красивыйquot; — нигде в этих словах не присутствует буква quot;Тquot;.
စမ်းသပ်ခြင်းစကားလုံးများကိုစကားစာလုံးပေါင်းစစ်ဆေးရွေးချယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, တစ်ဦးစကားလုံးဖို့ရှေးခယျြ, unstressed ဖြစ်လာခဲ့သည်စာထွက်စစ်ဆေးပါ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, စိစစ်တဲ့စကားလုံး Quote နိုင်ပါတယ်; Krasivyyquot; ။
Чтобы проверить написание слова quot;прекрасныйquot; необходимо подобрать проверочные слова. А именно, слова — краса, красивый, прекрасен — в этих словах отчетливо отсутствует буква quot;Тquot;, которую так хочется некоторым написать))). Приставка в слове quot;прекрасныйquot; — пре- , так как употребляется в значении quot;оченьquot;или пере-.
သမ်မာကမျြးပြီးပြည့်စုံသောရေးသားမှုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြစ်အတွက်စာတစ်စောင်ကို T မရှိဘဲ။ ဒီစကားလုံးမှ CAPTCHA နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုလှပသောဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစမျးသပျကောငျး, ချော, T က :. Fine မပါဘဲရေးထား, ထို့ကြောင့် t ကိုစာနှင့်အတူစကားလုံးမပြောနိုင်ပါဘူး။
ဒီစကားလုံးသုံး orfogrammy အတွက်:
1)приставка ПРЕ — в значении ОЧЕНЬ красивый (надо выучить и знать)
2)отсутствие НЕПРОИЗНОСИМОГО согласного Т — проверить прекраСЕн
3)окончание ЫЙ — окончание прилагательного Мужского рода (если бы было записано словосочетание, его можно было бы проверить по вопросу КАКОЙ?)
21 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,370 စက္ကန့်ကျော် Generate ။